Sintomy sy apetraho ireo lohahevitra ho an'ny Xiaomi Mi A1 (SKINS) | Androidsis
Francisco Ruiz | | Ataovy miavaka ny Android, Tutorials, Xiaomi
Amin'ity fampianarana video azo ampiharina vaovao ity dia manazava ny fomba misintona sy mametraka lohahevitra ho an'ny Xiaomi Mi A1, Ireto lohahevitra na hoditra ireto dia manan-kery ho an'ny Xiaomi Mi A1 rehetra izay manodina ny kinova Android Oreo, izany hoe, ny fanavaozana farany azo alaina ho an'ny terminal Android manaitra izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo terminal farany tsara indrindra amin'ny taona ary ny tsy ampoizina lehibe amin'ny vanim-potoana.
Azo atao izany rehetra izany noho ny mpampiasa ny Androidsis Community amin'ny Telegram, vondrom-piarahamonina efa mihoatra ny mpikambana 7200 ary amin'iza afaka miditra ianao amin'ny fikitihana ity rohy ity ihany. Ilay mpampiasa resahina dia @ BlackFire15, izay nifampizara ny asan'ny a Mpitsapa vondrom-piarahamonina Xiaomi, mpitsapa antsoina hoe Andrei Ortega izay niasa vitsivitsy ary lohahevitra tsara ho an'ny Xiaomi Mi A1. Avy eo avelako rohy ianao hampidinana azy ireo amin'ny alàlan'ny fiarahamonina Xiaomi mihitsy ary amin'ny alalàn'ny, vondrom-piarahamonina Androidsis mahafinaritra.
1 Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana lohahevitra ao amin'ny Xiaomi Mi A1
2 Fa ahoana no hametrahako ireo lohahevitra ireo amin'ny Xiaomi Mi A1?
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana lohahevitra ao amin'ny Xiaomi Mi A1
Tsotra ny fizotrany satria ao anatin'ny faritra misy ny Xiaomi Mi A1 anay, ao amin'ny faritra efijery, safidy mialoha, eo am-paran'ny faran'ny iray manontolo dia hahita faritra ianao izay amin'ny anaran'ny Lohahevitra momba ny fitaovana, Ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ireo lohahevitra izay alaina sy napetrakay amin'ny Xiaomi Mi A1 anay.
Fa ahoana no hametrahako ireo lohahevitra ireo amin'ny Xiaomi Mi A1?
Ny fametrahana ireo lohahevitra ireo ho an'ny Xiaomi Mi A1 dia mora toa sintomy ny apk ny lohahevitra mahaliana antsika, (amin'ity tranga manokana ity dia mamporisika anao aho hampidina azy rehetra satria maro amin'izy ireo no tsy fantatra fa mandeha amin'ny anaran'ny fisie), ary apetraho izy ireo amin'ny fomba fametrahantsika ireo rindranasa alaina ivelany amin'ny Google Play Store, ahafahan'ny safidy loharano tsy fantatra.
Amin'ity tranga manokana ity, satria ny lohahevitra dia fampiantranoana ao amin'ny Google Drive, tsy maintsy manome alalana amin'ny Drive na Google Chrome izahayMiankina amin'ny toerana ampidirantsika ireo lohahevitra, mba hiseho ilay installer automatique Android package ary afaka mametraka ny rindranasa izahay raha vao sintonina ilay rakitra apk.
Ny fidirana amin'ny Drive, izay misy ny namana Andrei Ortega manana ny lohahevitra noforoniny ho an'ny Xiaomi Mi A1 anao, azonao izany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Tranokala ofisialy Xiaomi fipihana io rohy io ihany o miditra amin'ny Communitysis Androidsis amin'ny Telegram y manontany momba ireo lohahevitra ho an'ny Xiaomi Mi A1.
Raha vantany vao nosintonina sy napetraka ny APK mifandraika dia hiseho eo amin'ny sehatra Android ilay lohahevitra resahina, ao amin'ilay faritra Seho fampiratiana / fandrosoana / lohahevitra momba ny fitaovana. Ny fanindriana fotsiny ny lohahevitra tiantsika hampiharina dia hampiharina ho azy eo izy io.
Efa naniry bebe kokoa ve ianao? Aza adino ireo fika ho an'ny Xiaomi Mi A1.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Sintomy sy apetraho ireo lohahevitra ho an'ny Xiaomi Mi A1 (SKINS)
Di dia hoy izy:
Salama! Manao ahoana ianao? Lazaiko aminao fa manana ny MiA1 fotsiny aho, ary tsy manana an'io fizarana io: S Ao amin'ny kinova Oreo, Android 8.0.0 ... Anisan'ireo tsy fahombiazan'ny fanavaozana ny rafitra ve izany? Inona no ataoko mba hanarenana azy?
Mamaly an'i Di
Andrei Ortega dia hoy izy:
Jereo ary, lahatsoratra miaraka amin'ny anarako, misaotra ny fahamendrehana.
Valiny tamin'i Andrei Ortega
Antonio Añasco dia hoy izy:
Ity dia ampiharina amin'ny kinova Oreo novaina na ao amin'ny tahiry, satria miaraka amin'ny Oreo aho miaraka amin'ny patch amin'ny volana aprily 2018 ary tsy mahita safidy hafa aho.
Valiny tamin'i Antonio Añasco
Tapitra hatreo ny programa Galaxy S8 beta
Raha mitady finday tena mahazaka ianao dia araraoty ny tolotra omen'ny NOMU anay andro vitsivitsy